Ozi kacha ọhụrụ banyere FCT si Nigeria & ụwa | TAA
Gọvanọ Fayose na-adụ ọdụ maka imebi ntuli aka
Gọvanọ Sani Bello gwara ndị òtù ahụ ka ha gbanwee ndị mmadụ
Ndị uweojii: Senator Melaye adịghị eji anyị
Ndị isi nke ndị uweojii na Federal Capital Territory (FCT) ekweghị na njide nke Sen. Dino Melaye na Nnamdi Azikiwe International Airport, Abuja, n'ụtụtụ Monday.
Gọvanọ Dickson: Ndị na-azụ anụ na-egosi na ala dara ada
Governor Gọvanọ Bayelsa, onye dị ebube bụ Henry Seriake Dickson na-ekwu na Nigeria na-agba ọbara ọbara nke ukwuu ma kewaa karịa mgbe ọ bụla.
Senator Omo-Agege na-agbachitere ikpe ụlọikpe iji gbochie ndị uweojii, DSS ka ha jide ya
Otu nnukwu ụlọikpe dị na Abuja nyere Ovie Omo-Agege, onye nnọchiteanya nọchite anya Central Delta, na-egbochi ndị uweojii, Ngalaba Sate Ọrụ (DSS) na ndị ọzọ na-achịkwa iwu na ijide ya.
2019: Anyị abughi akụkụ nke nkwado nke Buhari - Ohanaeze
Nzuko Igbo na-agbaso ya, Ohanaeze Ndigbo, kewapụrụ onwe ya site na nkwenye nke President Muhammadu Buhari maka ntuli aka 2019 site n'aka ụfọdụ ndị Igbo na-arụ ọrụ n'okpuru nchebe nke Ohaneze.
Nzukọ mba na-eme ka ihere mebie mba - ndị bi na FCT
Ụfọdụ ndị bi na Federal Capital Territory (FCT) kwuru na mwakpo Wednesday ga-abata ndị Senate site na hoodlums, bụ ndị ji ike gbaa nwunye ahụ ọsọ, gosipụtara ụlọ ọrụ nchebe dị na mba ahụ.
Karịa 7 nde PVC na-eche nchịkọta - INEC
Ụlọrụ Nọọmenti Independent National Electoral Commission (INEC) ekwuola na ọ ka na-enweta 7,920,129 na-eme kaadị votu na-adịgide adịgide (PVC) ma na-anakọta ya site na ụlọ ọrụ ya na mba ahụ.
FRSC kwupụtara na ọ dịghị onye karịrị iwu okporo ụzọ na Abuja
Ndi Federal Road Safety Corps ekwuputara na o nweghi onye obula kariri iwu okporo ahia na Federal Capital Territory, Abuja.
Ụlọ ọrụ gọọmentị Federal kwadoro ụlọ akụ ike maka ike 7,000 ezinụlọ
Minista nke Ike, Ọrụ na Ụlọ, Mr Babatunde Raji Fashola, nyere ụlọ akụ 60MVAR akụ na windo Apo 132 / 33KV ntinye aka na Abuja iji mee ka ọkụ eletrik dịkwuo n'ụlọ 7,000.
Ndị uweojii: Ọ dịghị ọnwụ na mpụ na Shiite Abuja
Iwu ndị uweojii na Federal Capital Territory (FCT) na Monday, kwuru na ejidere ndị 115 ndị òtù Alakụba nke Nigeria (IMN) n'oge mkpesa ime ihe ike na Abuja.
123...31Page 1 nke 31
Gọọmenti nke Ekiti State, Ayodele Fayose, dụrụ ndị òtù Ntorobịa Nlekọta Ndị Ntorobịa aka ka ha ghara ikwe ka ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị jiri ha mee nhọpụta.
Ngwaahịa ahịa nke Naijiria (NSE) na-amaliteghachi maka izu na Monday na nkwụsị na-ezighị ezi nke 0.12 pasent.
Gov. Abubakar Bello nke Niger ekwuola ndị òtù ahụ ka ha bụrụ ndị na-agbanwe agbanwe ma na-akpọkọta ndị obodo ha na-agakwuru Nigeria.
Alex Iwobi Super Eagles na-ekele Arsene Wenger
Alex Iwobi kwuru na ọ nwere ekele na ọ ga-ahapụ onyeisi Arsenal Arsenal Arsene Wenger maka inyere ya aka ka ọ bụrụ onye na-egwu egwu na onye.
Paul Bassey: Ọ dịghị mma na NPFL
Onye isi oche nke Akwa United, Paul Bassey, akwaala arịrị na enwechaghị ndị na-eme egwuregwu na NPFL mgbe okpukpu atọ kpụpụrụ CAF Confederation Cup n'izu gara aga.
Femi Falana: Ndị na-ekpechite ọnụ nwere ike imeri nkwenye ụlọ ha
Lagos lawyer lawyer Femi Falana kwuru na ndị mejupụtara nwere ike imeri nkwusioru nke onye na-enye ha iwu ma ọ bụ na mgbakọ mba ma ọ bụ nke ọ bụla nke steeti ụlọ nzukọ.